कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा तथा लगानी निक्षेपको ८९.१ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको तेस्रो त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख छ । गत असार मसान्तमा यो ८१.२ प्रतिशत थियो । बैंकहरूले तरलता अभाव रहेको बताए पनि कर्जा लगानीमा भने नियन्त्रण गरेका छैनन् । गत साउनयता बैकको कर्जा तथा लगानी नौ महिनामा ११.३ प्रतिशतले बढेको छ । चैतसम्ममा बैंकहरूले निक्षेप संकलनभन्दा बढी तीव्रताका साथ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस अवधिमा निक्षेप संकलन रू २६ अर्ब ५१ करोड भएको छ भने कर्जा प्रवाह रू ५८ अर्ब ६० करोड भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानी गर्न बैंकहरूलाई कडाइ गरेको भए पनि यस क्षेत्रमा पनि लगानी बढेको छ । अघिल्लो आवको पहिलो नौ महिनामा रू९ अर्ब ४६ करोड रहेको घरजग्गातर्पmको लगानी चालू आवको साही अवधिमा रू. १६ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । बैंकले पहिलो नौ महिनामा निजी क्षेत्रतर्फको कुल लगानी अघिल्लो आवको सोही अवधिको भन्दा रू. ९ अर्ब २३ करोडले बडाएका छन् ।
अहिले वाणिज्य र्बैंक समूहको जम्मा निक्षेपको तरलता रू. ६२ अर्ब ९२ करोड रहेको थियो । निक्षेप र अन्य तरल सम्पत्तिसमेत गरेर अहिले बैंकहरूसँग करिब डेढ खर्ब रुपैयाँको तरलता रहेको राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।
वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको संस्था परिवर्तन र त्यसको असर[२०७७ फागुन, १९]